नेता किम र पुटिनबीच पूर्वी रुसमा भेटवार्ताको तयारी
काठमाडौँ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–अनले अर्को साता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पूर्वी रुसमा भेटवार्ता गर्ने सम्भावना रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
चीनमा आयोजना हुने एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा रुसको पूर्वी क्षेत्रको भ्रमणमा आउन लागेका रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग किमले भेटवार्ता गर्ने सम्भावना छ । स्रोतले योनहापलाई भनेको छ, 'रुसी राष्ट्रपति पुटिन अप्रिल २४ मा रुसको पूर्वी क्षेत्रको भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । त्यही समयमा दुबै नेताबीच रुसमै भेटवार्ता हुने सम्भावना छ ।'
राष्ट्रपति पुटिन आगामी अप्रिल २६–२७ मा बेइजिङमा आयोजना हुने 'वान बेल्ट, वान रोड' अर्थात् बिआरआईको सम्मेलनमा सहभागी हुदैँछन् ।
यसै महिनाको शुरुमा रुसी गृहमन्त्री भ्लादिमिर कोलोकोच्सेभले प्योङयाङको भ्रमण गरेका थिए । पुटिनले गत वर्ष मे महिनामै नेता किमलाई रुस भ्रमणको निम्ता दिएका थिए, तर भ्रमण हुन सकेको थिएन । उत्तर कोरियाले नेता किम र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच गत फेब्रुअरीको भियतनामको हनोईमा सम्पन्न वार्ता बिफल भएसँगै रुससँगको सम्बन्ध विस्तारमा विशेष ध्यान दिएको छ ।
नेता किमले गत वर्षयता नै चीनको चार पटक भ्रमण गरिसकेका छन् । तर सन् २०११ मा सत्तामा आएपछि नेता किमले रुसको भ्रमण गरेका छैनन् । रासस/योनहाप
टाउको दुख्यो ? अब के गर्ने ?
एक नेपालीसहित ७ महिलाको हत्या गर्ने 'सिरियल किलर' पक्राउ